၂၀၁၉အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် အော်စကာဆုကို ဘယ်သူရနိုင်မလဲ? - For her Myanmar
၂၀၁၉အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် အော်စကာဆုကို ဘယ်သူရနိုင်မလဲ?
နံပါတ် (၂)မှာ လူက ဟာခနဲ…
အော်စကာလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲကြီးမှန်း ယောင်းတို့ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ရဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက်မှာ ကျင်းပမှာပါ။ ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲ ဒီနှစ်မှာလည်း ဘယ်သရုပ်ဆောင်က ဇာတ်ဆောင်ဆု၊ ဇာတ်ပို့ဆုတွေ ရမယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုအတွက် တစ်ပေးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ …
၁။ Glenn Close
အသက် (၇၁)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီး Glenn Close ကတော့ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ “The Wife” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက အဓိကဇာတ်ဆောင်အတွက် အော်စကာဆုရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အနှစ်လေးဆယ်ကြာအိမ်ထောင်သက်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သစ္စာဖောက်မှုတွေ၊ ကတိကဝတ်တွေနဲ့ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတာတွေကို ပြန်စဉ်းစားရင်း သူ (မ) ရဲ့ဘဝဆုံးဖြတ်ချက်တွေက မှန်ကန်မှုရှိပါ့မလားလို့ သံသယဝင်လာတဲ့ Joan နေရာကနေ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာပါ။
Related article >>> လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ၂၀၁၈ ရဲ့ ဆုရဇာတ်ကားကောင်း များ
၂။ Lady Gaga
ဟုတ်ပါတယ်.. ယောင်းတို့ အမြင်မမှားပါဘူး… အဆိုတော် Lady Gaga ပါ။ Lady Gaga က “A Star Is Born” ရုပ်ရှင်အတွက် အော်စကာကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းခံနေရတာပါ ယောင်းတို့ရေ။ ရုပ်ရှင်ကတော့ ၁၉၇၆၊ ၁၉၅၄၊ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွေမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အရင်ဇာတ်လမ်းအတိုင်းပါပဲ။ Lady Gaga ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ဝိုးခနဲ ဖြစ်သွားစေမှာ ကျိန်းသေပါပဲ ယောင်းတို့ရေ..
၃။ Melissa McCarthy
တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ရအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အတ္ထုပတ္တိတွေကို မှတ်တမ်းတင်သူ Lee Israel ဟာ အရက်စွဲနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တော်တော်လည်းချွတ်ခြုံကျနေပါပြီ။ အပေါင်းအသင်းမရှိဘဲ အထီးကျန်နေတဲ့သူ(မ)ဟာ တစ်ဦးတည်းသောတွယ်တာရာ ဖြစ်တဲ့ သူ(မ)ရဲ့ကြောင်လေး နေမကောင်းဖြစ်တော့ ကြံရာမရဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်တွေရဲ့ စာတွေကို အတုလုပ်ပြီး လိမ်ရောင်းပါတော့တယ်။ ရုပ်ရှင်နာမည်ကတော့ “Can You Ever Forgive Me?” ပါ။ Lee Israel နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားသူကတော့ Melissa McCarthy ဖြစ်ပြီး အော်စကာဆုက လက်တစ်ကမ်းအလိုကို ရောက်နေပါပြီနော်..
Related article >>> ၂၀၁၈ အတွက် IMDb ကရွေးချယ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကား (၅) ကား
၄။ Olivia Colman
“The Favourite” ရုပ်ရှင်ကားအတွက်နဲ့ အော်စကာဆုရဖို့ ခန့်မှန်းထားခြင်းခံရတဲ့ Olivia Colman ကတော့ အဆိုပါရုပ်ရှင်မှာ ဗြိတိန်ရဲ့ ဘုရင်မ Queen Anne အဖြစ် ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ (၁၈)ရာစုအစောပိုင်းမှာ ဘုရင်မရဲ့ မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရဖို့အတွက် အားပြိုင်ကြတဲ့ လူယုံအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတာဖြစ်လို့ ဘုရင်မနဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကြားက အရှုပ်အထွေးတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Related article >>> ၂၀၁၉ အတွင်း အသစ်ထွက်ရှိလာမည့် နိုင်ငံတကာဇာတ်ကားများ
၅။ Yalitza Aparicio
မက်ဆီကန်လူမျိုးသရုပ်ဆောင် Yalizta Aparicio ကတော့ Netflix က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ “Roma” ရုပ်ရှင်ကားအတွက် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကို မျက်စပစ်နေပါပြီ။ ဒီရုပ်ရှင်က တကယ်တော့သူ(မ)ရဲ့ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အတွက် ပထမဆုံး ဇာတ်ကားမှာတင် အော်စကာတန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ “Roma” ကို ကြည့်ရင်တော့ မက်ဆီကိုက လူလတ်တန်းစားမိသားစုတစ်စုရဲ့ အိမ်အကူအဖြစ် သူ(မ)ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားထားလဲ တွေ့နိုင်မှာပါ။
Stella ကတော့ ဒီနှစ် အော်စကာပေးပွဲမှာ ဘယ်အနုပညာရှင်တွေက အော်စကာဆုတွေ သိမ်းပိုက်သွားမှာလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ရင်း ရင်ခုန်နေပါပြီ။ ယောင်းတို့ကော ….?
နံပါတျ (၂)မှာ လူက ဟာခနဲ…
အျောစကာလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးက စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့ရတဲ့ ရုပျရှငျဆုပေးပှဲကွီးမှနျး ယောငျးတို့ သိကွမယျ ထငျပါတယျ။ ၂၀၁၉ ရဲ့ အျောစကာဆုပေးပှဲကို ဖဖေျောဝါရီ (၂၄) ရကျမှာ ကငျြးပမှာပါ။ ခါတိုငျးနှဈတှလေိုပဲ ဒီနှဈမှာလညျး ဘယျသရုပျဆောငျက ဇာတျဆောငျဆု၊ ဇာတျပို့ဆုတှေ ရမယျဆိုပွီး ကွိုတငျခနျ့မှနျးခကျြတှေ ရှိနပေါတယျ။ အဲ့ထဲကမှ အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆုအတှကျ တဈပေးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေတော့ …
အသကျ (၇၁)နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ မငျးသမီးကွီး Glenn Close ကတော့ သူ့ရဲ့နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ “The Wife” ရုပျရှငျဇာတျကားထဲက အဓိကဇာတျဆောငျအတှကျ အျောစကာဆုရမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။ အနှဈလေးဆယျကွာအိမျထောငျသကျမှာ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ သစ်စာဖောကျမှုတှေ၊ ကတိကဝတျတှနေဲ့ ဖိနှိပျခံခဲ့ရတာတှကေို ပွနျစဉျးစားရငျး သူ (မ) ရဲ့ဘဝဆုံးဖွတျခကျြတှကေ မှနျကနျမှုရှိပါ့မလားလို့ သံသယဝငျလာတဲ့ Joan နရောကနေ ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျထားခဲ့တာပါ။
Related article >>> လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ၂၀၁၈ ရဲ့ ဆုရဇာတျကားကောငျး မြား
ဟုတျပါတယျ.. ယောငျးတို့ အမွငျမမှားပါဘူး… အဆိုတျော Lady Gaga ပါ။ Lady Gaga က “A Star Is Born” ရုပျရှငျအတှကျ အျောစကာကို ပိုငျဆိုငျရမယျလို့ ခနျ့မှနျးခံနရေတာပါ ယောငျးတို့ရေ။ ရုပျရှငျကတော့ ၁၉၇၆၊ ၁၉၅၄၊ ၁၉၃၇ ခုနှဈတှမှော ထှကျရှိခဲ့တဲ့ အရငျဇာတျလမျးအတိုငျးပါပဲ။ Lady Gaga ရဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှကေတော့ မထငျမှတျထားလောကျအောငျ ဝိုးခနဲ ဖွဈသှားစမှော ကြိနျးသပေါပဲ ယောငျးတို့ရေ..
တဈခတျေတဈခါက နာမညျရအနုပညာရှငျတှရေဲ့ အတ်ထုပတ်တိတှကေို မှတျတမျးတငျသူ Lee Israel ဟာ အရကျစှဲနသေူတဈယောကျဖွဈပွီး တျောတျောလညျးခြှတျခွုံကနြပေါပွီ။ အပေါငျးအသငျးမရှိဘဲ အထီးကနျြနတေဲ့သူ(မ)ဟာ တဈဦးတညျးသောတှယျတာရာ ဖွဈတဲ့ သူ(မ)ရဲ့ကွောငျလေး နမေကောငျးဖွဈတော့ ကွံရာမရဖွဈပွီး နာမညျကြျောတှရေဲ့ စာတှကေို အတုလုပျပွီး လိမျရောငျးပါတော့တယျ။ ရုပျရှငျနာမညျကတော့ “Can You Ever Forgive Me?” ပါ။ Lee Israel နရောကနေ သရုပျဆောငျထားသူကတော့ Melissa McCarthy ဖွဈပွီး အျောစကာဆုက လကျတဈကမျးအလိုကို ရောကျနပေါပွီနျော..
Related article >>> ၂၀၁၈ အတှကျ IMDb ကရှေးခယျြထားတဲ့ အကောငျးဆုံး ရုပျရှငျကား (၅) ကား
“The Favourite” ရုပျရှငျကားအတှကျနဲ့ အျောစကာဆုရဖို့ ခနျ့မှနျးထားခွငျးခံရတဲ့ Olivia Colman ကတော့ အဆိုပါရုပျရှငျမှာ ဗွိတိနျရဲ့ ဘုရငျမ Queen Anne အဖွဈ ပါဝငျထားတာဖွဈပါတယျ။ (၁၈)ရာစုအစောပိုငျးမှာ ဘုရငျမရဲ့ မကျြနှာသာပေးခွငျးခံရဖို့အတှကျ အားပွိုငျကွတဲ့ လူယုံအမြိုးသမီးနှဈယောကျအကွောငျးကို ရိုကျပွထားတာဖွဈလို့ ဘုရငျမနဲ့ အမြိုးသမီးနှဈယောကျကွားက အရှုပျအထှေးတှကေို မွငျတှရေ့မှာပါ။
Related article >>> ၂၀၁၉ အတှငျး အသဈထှကျရှိလာမညျ့ နိုငျငံတကာဇာတျကားမြား
မကျဆီကနျလူမြိုးသရုပျဆောငျ Yalizta Aparicio ကတော့ Netflix က ထုတျလှငျ့ခဲ့တဲ့ “Roma” ရုပျရှငျကားအတှကျ အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆုကို မကျြစပဈနပေါပွီ။ ဒီရုပျရှငျဟာဆိုရငျတော့ဖွငျ့ သူ(မ)ရဲ့ပထမဆုံး ရုပျရှငျဇာတျကားပဲ ဖွဈပါတယျ။ တကျသဈစသရုပျဆောငျတဈယောကျအတှကျ ပထမဆုံးဇာတျကားမှာတငျ အျောစကာတနျးဝငျသှားတယျဆိုတော့ ရငျခုနျစရာပါပဲ။ “Roma” ကို ကွညျ့ရငျတော့ မကျဆီကိုက လူလတျတနျးစားမိသားစုတဈစုရဲ့ အိမျအကူအဖွဈ သူ(မ)ဘယျလောကျထိကွိုးစားထားလဲ တှနေို့ငျမှာပါ။
Stella ကတော့ ဒီနှဈ အျောစကာပေးပှဲမှာ ဘယျအနုပညာရှငျတှကေ အျောစကာဆုတှေ သိမျးပိုကျသှားမှာလဲဆိုတာ စောငျ့မြှျောရငျး ရငျခုနျနပေါပွီ။ ယောငျးတို့ကော ….?
Tags: 2019, award winning, awards, best actress, flim, Movie, Movies, nominations, oscar, Oscar Award
Coco Chanel (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးဖက်ရှင်လောကကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သူ
Stella February 21, 2019
Netflix ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ (၄) ကား